ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် vs. partner လက်ဆောင်များ – သင်ကားအဘယ်သူသနားတော်မူမည်?
အားဖြင့် Amilia Davidson
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: နိုဝင်ဘာ. 24 2020 | < 1
တကမ္ဘာလုံး, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာအများစု၏ကြီးမားတဲ့အစိတ်အပိုင်းများမှာ. ကျနော်တို့သူတို့မရှိဘဲအသက်မရှင်နိုင်ပါ; ကျွန်တော်တို့မိသားစုအဖွဲ့ဝင်များကဲ့သို့သူတို့ကိုငါကုသ, ကျနော်တို့မိုက်ကသူတို့ကို pamper, သစ်ကိုငါတို့သည်မိတ်ဖက်ချိန်းတွေ့သည့်အခါတခါတရံတွင် ... ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့မိတ်ဖက်သို့မဟုတ်အိမ်ထောင်ဖက်ထက် သာ. ကောင်း၏သူတို့ကိုကုသလတ်တလောအသုတေသနလုပ်ငန်းကျွန်တော်တို့ဇာတ်ကောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ '' တရားသူကြီးအပေါ်မှီခိုအားထားရုံမည်မျှအပေါ်အံ့သြစရာကိန်းဂဏန်းများပြသခဲ့သည်, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်-ပိုင်ရှင်များ DateMyPet drive ကိုများနှင့်ကိုက်ညီသောကိုင်ပြီးနှင့်အတူ: "သင်ငါ့ကိုအချိန်းတွေ့ကြလိုလျှင်, သင်သည် "ငါ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ချိန်းတွေ့ဖို့ရှိသည်.
ဒါကြောင့်အသံကဲ့သို့ဒေါသထွက်စရာ, ကျွန်ုပ်တို့သည်အချို့သောမိသားစုအဖွဲ့ဝင်များကျွန်တော်တို့၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကြိုက်တတ်တဲ့ပြုပါ? အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအဘို့အကြှနျုပျတို့၏မတ်ေတာလေ့လာစူးစမ်းဖို့, ဒီ infographic ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအကြားဆက်ဆံရေးကိုအတွင်းကွဲပြားခြားနားမှုသို့ရှာဖွေနေတဲ့အလင်းနှလုံးနှိုင်းယှဉ်ထောက်ပံ့, မိတ်ဖက်များနှင့်မိသားစုဝင်များသည်, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှု, မတူညီတဲ့အားလပ်ရက်ကာလအတွင်းလက်ဆောင်လှူဒါန်းမှုများနှင့် Favourite.
ဒီ infographic Amilia အားဖြင့်လှူဒါန်းခဲ့ခဲ့သည်, ကိုယ်စား GoneDigging.co.uk.
6 your Cell Phone ကို Down ထားရန်အကြောင်းပြချက်
7 သင်တစ်ဦး Foodie ချိန်းတွေ့ခြင်းမပြုမီသိထားသင့်သောအရာတို့ကို